XOG: Axmed Madoobe oo shirqool dil h u maleegaya musharaxiinta ka horjeeda – War La Helaa Talo La Helaa Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /customers/6/c/2/shaaciye.org/httpd.www/wp-includes/post-template.php on line 316
XOG: Axmed Madoobe oo shirqool dil h u maleegaya musharaxiinta ka horjeeda
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam “Axmed Madoobe” ayaa sida la sheegay dil u qorsheeyay qaar ka mid ah musharaxiinta ka horjeeda ee uu kaga cabsanayo iney ku ciriiriyaan tartanka madaxtinimada Jubbaland.
Qaar ka mid ah dadka u ololeynaya musharax madaxweyne C/llaahi Ciilmooge Xirsi oo horay u soo noqday Wasiirkii Warfaafinta Federaalka ayaa inoo sheegay in musharax Ciilmooge uu cabsi ka muujinayo in lagu dilo magaalada Kismaayo,maadama uu ka mid yahay musharaxiinta tartanka adag la geli kara Axmed Madoobe.
Sidoo kale, C/llaahi Ciilmooge Xirsi ayaa la sheegay in laga mamnuucay tagitaanka magaalada Kismaayo si uu u muujiyo ololahiisa musharaxnimo ee Jubbaland,wuxuuna hadda ku sugan yahay magaalada Muqdisho.
Wasiirkii hore ee Warfaafinta Xukuumadda Soomaaliya Soomaaliya hadana ah musharax u taagan xilka madaxweynaha Jubbaland iyo xubno Wasiiro ah oo ka tirsan Dowladda Federaalka una taagan xilka madaxtinimada Jubbaland ayaa cabsi ka muujiyay teginaakooda Kismaayo,islamarkaana dhalinyaro uu Axmed u dhiibay Baskoolad loo carbiyeeyay iney shirqool ku dilaan mas’uuliyiintan.
Ciilmooge oo ku heyb ah Axmed Madoobe ayaa sidoo kale ka badbaaday weerarkii dhawaan lagu qaaday Hotel Cascaseey ee magaalada Kismaayo,kaasi oo dad badan ay ku dhinteen.
Illo xog ogaal ah oo Musharaxa mu dhow ayaa inoo sheegay in Weerarkaasi qorshaha uu ahaa in lagu dilo Ciilmooge,balse saddex beri ka hor intuusan Qaraxa dhicin Kismaayo uu ka soo ambabaxay.
Shir Jiraa’id uu ku qabtay magaalada Muqdisho ayuu ku cadeeyay in weerarkaasi isaga loola dan lahaa in lagu qarijiyo,balse uu Alle ka badbaaday.
Wasiir Ciilmooge ayaa sheegay in Maamulka Jubbaland uu ku fashilmay howlihii loo igmaday, isla markaana loo baahan yahay inuu is bedel ka dhaco.
Dowladda Soomaalita oo shaacisay inay heystaan culeysyo Caalami ah